Semalt Expert: Ahoana no Hiadiana Amin'ny Fanadinana Fanahy Amin'ny Spam?
Ny spam referrer dia endrika vaovao sy manahirana amin'ny spam. Ireo mpandika lalàna tsy misy dikany dia miantso ny tranokalanao sy spam ny data Google Analytics. Azonao atao ny manamarina ny tranonkalanao ho an'ny spam referrer raha mahatsapa ny fiakarana tampoka sy tsy mahazatra eo amin'ny fifamoivoizana ianao. Tokony hanamarina ny tatitra Google Analytics amin'ny fomba tsy tapaka mba hahitana raha mahazo mpitsidika tena izy na mpizahatany. Misy karazana roa amin'ny karazana fitsangatsanganana: ny voalohany dia momba ny mpitsikilo hitsidika ny tranonkalanao ary mahatonga ny hitsikerana sy ny fahatsapana tsy tontosa, ary ny karazany faharoa dia manintona ny ID Analytics - umzug urlaub gesetzlich. Ny ID Analytics ID anao dia nofinidy, ary nanomboka nahazo ny fifamoivoizana izay tsy midika na inona na inona amin'ny tranokalanao.
Artem Abgarian, mpitantana mpanampy amin'ny fahombiazan'ny mpanjifa Semalt , dia manome toro-hevitra sasantsasany momba ny fomba hiadiana amin'ny spam.
Anisan'ny karazana fampahalalam-baovao mahazatra sy nentim-paharazana indrindra ny spam referral. Ny momba ireo spiders sy bots izay manasongadina ny tranonkalanao sy mandefa azy amin'ny fifamoivoizana. Tsy fantatry ny mpitsikilo ny fitsipika momba ny soatoavina meta sy ny robots.txt, ary ny sombin-dresaka dia mety hijanona amin'ny sivana ao amin'ny kaontinao Google Analytics. Manoro hevitra anao izahay hanakana ny spam mitifitra amin'ny alàlan'ny tahadika .htaccess.
Mitandrema ny mpitsikilo ao amin'ny .htaccess:
Azo atao ny manakana ny mpilalao horonan-tsary ao amin'ny .htaccess..Tokony hampiditra fehezan-dalàna voafaritra amin'ny antontan-taratasinao HTML ianao ary tsy ho voafafa ny spam crawlers. Tokony hotadidinao fa tsy mahavita mampiasa spam ara-panahy ianao. Ghost Spam dia karazam-pitenenan'ny referrer ary mahatonga ireo server mpanitsy ny fitsidihana ny tranokalanao. Ny spambots dia manandrana mamitaka amin'ny kaonty Google Analytics anao na mangalatra ny ID ny adiresinao amin'ny fandefasana anao ny fifamoivoizana maloto.
Azonao atao ny mahita ny tranokalanao amin'ny ambony ao amin'ny valin'ny fikarohana , saingy tsy haharitra ela izany. Ny hackers sy spammers dia matetika mampiasa ny Protocol Protocol momba ny Measurement, izay ahafahan'izy ireo mandefa mivantana avy hatrany amin'ny Google Analytics Servers. Io no fahadisoana voalohany ao amin'ny Google Analytics ary tokony haverina haingana araka izay tratra. Azonao atao ny manamboatra ny olana amin'ny famoahana ireo angona afa-tsy amin'ny anaran'ny mpampiantrano izay ampiasain'ny ID analytics. Ataovy azo antoka fa tsy ampifanarahana amin'ny fanovana ny fanovana; Ny olana tokana amin'ity vahaolana ity dia ny tsy maintsy hamoronana filters amin'ny tanana, ary mety ho enta-mavesatra ho an'ny olona izany. Tokony hanakana ny fampiantranoana referrer ianao tsy hitsoka ny data Google Analytics sy ny sivanao. Noho izany dia tokony hametraka ny fepetra manohitra ny antontam-pirinty ao amin'ny kaontinao Google Analytics ianao ary esory ireo bitsika sy spider avy amin'ny antontan'isao:
1. Mandehana any amin'ny kaonty Google Analytics ary tsidiho ny pejy "Settings" .
2. Hamarino ny safidy izay milaza ny "fitahirizana spambots fantatra."
Raha te hanala ny spam referanso ianao, dia tokony hanao lisitry ny mpampiantrano valiny marina ary hametraka azy ireo amin'ny format REGEX. Azonao atao ihany koa ny mamorona sivana sasany ao amin'ny Google Analytics ary ampio ny tranonkala rehetra toy ny semalt.com sy darodar.com amin'ny sivana mba hisakana azy ireo. Tsy tokony hohadinoinao fa ity asa an-tsehatra ity dia tsy miasa afa-tsy rehefa madio ny angona misy anao.